Shirkadaha Maaliyadeed ee ugu Sareeya ee Macaamiisha 2022 - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Shirkadaha Maaliyadeed ee ugu sarreeya ee Macaamiisha 2022
Helitaanka shirkadda maaliyadeed ee macaamiisha ugu fiican ee ganacsigaaga way adkaan kartaa. Shirkado badan ayaa bixiya adeegyo la mid ah, markaa way adagtahay in la ogaado midka sida ugu fiican ugu shaqayn doona miisaaniyadaada iyo yoolalkaaga. Taasi waxay tidhi, ganacsiyo badan iyo in ka badan ayaa fahmaya inay u baahan yihiin inay la shuraakoobaan shirkadda maaliyadeed ee macaamiisha saxda ah si dhakhso ah halkii ay ka dambayn lahayd.
Haddii kale, waxaad halis u tahay inaad lumiso macaamiisha suurtagalka ah, dalabaadka adeegga iyo iibsashada, ama ka sii daran: la shaqaynta amaah-bixiye khaldan ama maalgashadayaasha.
Maqaalkani wuxuu sharxi doonaa waxa ay yihiin shirkadaha maaliyadeed ee macaamiisha, faa'iidooyinkooda iyo sida aad u heli karto shirkad maaliyadeed oo macaamiisha ah oo adiga kugu habboon!
Waa maxay maalgelinta macaamiishu?
Maalgelinta macaamiishu waa nooc ka mid ah amaahinta kaas oo alaabta lagu gato lacag caddaan ah qorshaha lacag bixinta dib loo dhigay.
Qorshayaashan waxa la dejin karaa in ka yar hal ilaa laba toddobaad ama waxay socon karaan sannad dhan, shirkadaha qaarna waxay bixiyaan dayn qayb-qaybsi si aanay lacag-bixinnada ugu baahnayn in hal mar la bixiyo.
Marka la soo koobo: maalgelinta macaamiishu waa agabka maaliyadeed ee ka caawin doona macaamiishaada inay iibsadaan dookhooda.
Waa maxay shirkadda maaliyadda macaamiisha?
Asal ahaan, shirkadda maaliyadda macaamiishu waa nooc ka mid ah shirkad bixisa maalgelinta macaamiisha. Si aad u noqoto mid la taaban karo, shirkadaha maaliyadda macaamiishu waa hay'ado maaliyadeed oo bixiya alaabooyinka amaahda macaamiisha aan la hubin sida amaahda qaybinta iyo khadadka deynta.
Noocyada amaahda ah waxaa inta badan isticmaala dabaqada dhexe ee Maraykanka kuwaas oo aan aqoonsan bangiyo dhaqameed badan ama deyn-bixiyeyaal sababtoo ah dhibcaha credit credit ama arrin kale. Sidaa darteed, iyadoo lala kaashanayo ganacsiyada, shirkadaha maaliyadda macaamiishu waxay bixin karaan xal maaliyadeed oo dabacsan macaamiishooda ama bukaannada.
Noocyada shirkadaha maaliyadeed ee macaamiisha
Waxaa jira dhowr nooc oo shirkado ah oo bixiya xalal maaliyadeed macaamiisha. Tusaale ahaan, waxaa jira shirkado maaliyadeed oo macmiisha ah oo bixiya deymo shaqsiyeed, deyn qaybinta tafaariiqda, iyo khadadka deynta guryaha.
Nooca shirkadda maaliyadeed ee macaamilka ee kugu habboon waxay ku xirnaan doontaa nooca buundada credit iyo arrimaha kale ee noloshaada ayaa ah kuwa ugu habboon helitaanka amaah ama line of credit.
Si kastaba ha ahaatee, ka hor intaanan gelin taas, aan si dhow u eegno meelaha ugu muhiimsan ee ay hay'adaha maaliyadeed u bixiyaan maalgelinta macaamiisha.
Amaahda shakhsi ahaaneed waa nooc ka mid ah maalgelinta ay bixiyaan shirkadaha maaliyadeed ee macaamilka qaarkood oo ay siiyaan macaamiisha leh dhibco deymo xun ama aan lahayn.
Amaahda noocaan ah waxay siisaa deyn-bixiyuhu fursad uu ku amaahdo lacag ay u isticmaali karaan ujeeddo kasta oo ay u arkaan inay lagama maarmaan tahay. Tusaale ahaan, deyn-bixiyuhu wuxuu u isticmaali karaa lacagta si uu u adkeeyo deyntooda, iska bixiyo biilka caafimaadka ama iibsada shay aysan awoodin.
Amaahinta Rabitaanka Tafaariiqda
Waa wax caadi ah in shirkadaha maaliyadeed ee macaamiisha ay bixiyaan amaah qayb tafaariiq ah, kuwaas oo qaarkood ay si gaar ah ugu takhasuseen. Badanaa waxaa loo yaqaanaa shirkadaha RILO (amaahiyeyaasha tafaariiqda qaybiya), ganacsiga noocan ahi wuxuu macaamiisha siin doonaa amaah ay ku iibsadaan alaabada.
Dukaanle weyn ayaa bixin doona nooc maalgelin ah oo loo yaqaan amaahda qaybinta tafaariiqda ee dib-u-noqoshada, taas oo asal ahaan ah khad deyn ah oo furan oo aan lahayn xad la sii doortay ama erey dib-u-bixineed taas oo u oggolaanaysa macaamiisha aan awoodin inay helaan noocyo kale oo deyn ah (ama leh credit credit) helitaanka credit credit macaamiisha marka loo baahdo.
Tafaariiqleyaashu waa kuwa u qalma inay helaan deymahan si ay u awoodaan inay ku bixiyaan alaabo qiimo jaban kuwaas oo macaamiishu u isticmaali karaan qorshe qayb-qaybsi oo leh lacag-bixin bille ah, sida lagu arko shirkadaha maaliyadeed ee tafaariiqda iyo kaararka deynta.
Khadadka Sinaanta Guriga (HELOC)
Kaydinta sinnaanta gurigu waa nooc dayn ah oo u adeegsata sinnaanta gurigaaga dammaanad ahaan.
Waxaad ka bixi kartaa ilaa xadka deynta buuxda ee baahida, waxaana kaliya lagaa rabaa inaad bixiso lacag-bixinno dulsaar-kaliya (mabda'a ama dib-u-bixinta) ilaa aad si buuxda u bixiso.
Tani waa qaab soo jiidasho leh oo maalgelin ah sababtoo ah waxay bixisaa dabacsanaan badan oo ka badan noocyada kale ee deymaha.
Xaalad kasta, waxaa jira dhowr nooc oo shirkado maaliyadeed ah, muhiimadduna waa in la ogaado midka kugu habboon.
Qaybaha Maalgelinta Macaamiisha
Kuwani waxay tixraacayaan shuruudaha iyo shuruudaha ku xeeran sida deynta loo bixiyo.
Tani waxay si toos ah saameyn kuugu yeelan doontaa marka la eego sida ugu dhakhsaha badan ee aad u hesho lacagtaada adeegyada la bixiyo marka macmiilku dalbado.
Mid ka mid ah dhinacyada aasaasiga ah ee maalgelinta macaamiishu waa dulsaarka la bixiyo marka macaamilku ogolaado inuu maalgeliyo adeegyadaada. Dulsaarka dulsaarka waxa loola jeedaa kharash dheeraad ah oo la dulsaaray daynta kaas oo ay tahay in dayn-bixiyuhu ku bixiyo muddo go'an. Tan badanaa waxaa loo xisaabiyaa boqolkiiba.
Shirkadaha maaliyadeed ee amaah-bixiyeyaasha dhinac saddexaad ee dhaqameed waxay caan ku yihiin bixinta sicirka dulsaarka sare ee deynta adeegga. Tani waxay niyad-jab ku noqon kartaa macaamiisha mustaqbalka kuwaas oo laga yaabo inay dareemaan in heerka dulsaarka sare uusan noqon karin go'aan maaliyadeed oo caqli-gal ah mustaqbalka fog.
Waxyaabo kale oo weyn oo ka mid ah maalgelinta macmiisha waa xarumaha adeegga ee ku wareegsan wakhtiga amaahda. Ujeeddooyin wargelin ah, wakhtiga xaddidan waxa loola jeedaa muddada la siiyey macaamilka inuu dib u bixiyo deynta la bixiyey.
Haddii wakhtiga amaahdu uu yahay daaqad gaaban, waxa laga yaabaa inaanay soo jiidan macmiilka.
Dhanka kale, waa wax caadi ah in shirkad ama deyn bixiye ay bixiyaan waqtiyo badan oo lacag bixin ah laakiin dulsaarka sare.
Ganacsi ahaan xiisaynaya u fududaynta dhaqaalaha macaamilka ee macaamiishaada, waa muhiim inaad hubiso in aad ku hesho mushaharka wakhtiga loogu talagalay adeegyada lagu bixiyo.
Qaar ka mid ah shirkadaha maaliyadeed ee la shaqeeya ganacsiyada xalalka maaliyadeed ee noocan oo kale ah waxay kaliya ku sii daayaan qayb ka mid ah lacagaha marka macaamilku xaqiijiyo dalabkooda, mararka qaarkood waxay qaataan dhowr toddobaad ama bilo si ay ku siiyaan lacagta soo hadhay.
Faa'iidada shirkadaha maaliyadeed ee macaamiisha
Waxaa jira dhowr faa'iidooyin oo aad ka heli karto ka faa'iidaysiga barnaamijka maalgelinta macaamiisha oo tayo sare leh. Dhowr shirkadood oo maal-gelineed ayaa bixiya shuruudo gaar ah, laakiin dhammaantood ma bixiyaan faa'iidooyin isku mid ah.
Waxaa jira faa'iidooyin macaamiisha iyo ganacsiyada doorta inay isticmaalaan adeegyada maalgelinta. Maalgelintu waxay u oggolaanaysaa shakhsiyaadka inay bixiyaan bishiiba halkii ay ka bixin lahaayeen kharash hore oo ballaaran. Sida aad u malayn karto, dadka intooda badan ma wada isticmaali karaan lacag aad u badan hal mar.
Ogolaanshaha lacag-bixinta bishii, tiro badan oo macaamiil ah ayaa awood u yeelan kara alaabooyinkan qaaliga ah. Tani waxay u fiican tahay macaamiisha doonaya inay wax ku iibsadaan iyagoo ku saleysan qorshe lacag-bixineed, laakiin sidoo kale waxay u fiican tahay ganacsiyada doonaya inay macaamiisha cusub keenaan ganacsigooda.
Qorshayaasha Lacag-bixinta Muddada-dheer ee Macaamiisha
Macaamiisha suurtagalka ah ee ganacsiyada
Dariiqa Wanaagsan ee Lagu Dhisayo laguna Soo Celinayo Taariikhda Daynta
Shuruudaha Faa'iidada leh ee Dhowr Shirkadood oo Maalgelinta Tayada Sare ah
Kordhinta Iibka iyo Kobaca Ganacsiga
Kordhinta Soo Celinta Macaamiisha
Kobaca Saldhigga Macmiilka
Qorshayaasha Maaliyadda dabacsan
Qorshayaasha maaliyadeed ee dabacsan waa nooc amaah ah kaas oo dib loo bixin karo qayb-qayb. Qaarkood waxay ugu yeeraan amaahda qayb-qaybsiga, laakiin tani waa hadal khaldan sababtoo ah waxay ku lug leeyihiin dabacsanaan ka badan inta uu ereygu soo jeedin lahaa.
Amaahda noocaan ah waxay kasbatay shirkadaha maaliyadda macaamiisha sidoo kale sababtoo ah maalgelinta dabacsan waxay ka caawisaa inay koraan oo ay ballaariyaan saldhigga macaamiisha.
Maalgelinta dabacsanaantu waxay bixisaa waqtiyo kala duwan oo dib-u-bixineed kuwaas oo lagu habayn karo laguna hagaajin karo hadba baahidaada. Amaahiyaha waxaa laga yaabaa inuu xitaa bedeli karo shuruudaha deyntooda wakhti kasta.
Habaynta noocaan ah waa mid aad u dabacsan, waxaana lagu hagaajin karaa hadba sida loogu baahdo iyada oo aan wax kharash ah ama kharashaad ah lagu darin kuwaas oo caadi ahaan la xidhiidha dib-u-maalgelinta deyntaada.
Qorshayaasha maalgelinta dabacsan sidoo kale waxay leeyihiin sifooyin kale sida lacag bixinta ugu yar ee bishii oo aan ka badnayn qadar go'an ama xitaa heerarka dulsaarka hoose. Si kastaba ha noqotee, taasi way kala duwan tahay iyadoo ku saleysan shirkadda maaliyadeed ee bixisa xalka.
Qorshayaasha maaliyadeed ee dabacsan ayaa aad ugu dheeraada ganacsiyada sababahan soo socda awgood:
Xalkan maaliyadeed ee noocan ahi waa hab fiican oo lagu dhiso wacyiga sumadda ee macaamiisha mustaqbalka.
Xalka maalgelinta dabacsan ayaa sidoo kale gacan ka geysan kara kordhinta daacadnimada macaamiisha iyo xajinta heerarka, kuwaas oo muhiim u ah ganacsi kasta oo raadinaya inuu sii wado tartanka tartanka ee warshadaha.
Khatarta la yareeyey
Meheradaha doorta doorashadan waxa la yareeyey khatarta khatarta ah sababtoo ah haddii macaamiishu ku guuldareystaan ​​deynta, markaa waxay soo ceshan karaan qaddar go'an oo dammaanad ah.
Akhri: Amaahda Maaliyadeed ee Shaqsiyeed ee ugu Fiican 2021
Shirkadaha ugu sarreeya maaliyadda macaamiisha
PayPal Credit waa mid ka mid ah shirkadaha maalgelinta macaamiisha ugu caansan 2022. Waxay la shuraakoobeen dhowr tafaariiqle oo caan ah. Credit PayPal waxay u ogolaataa dukaamaysanayaasha inay wax ka iibsadaan mareegaha sida eBay, Best Buy, iyo Target. Macaamiisha u qalma waxay heli doonaan khad deyn oo bilow ah oo leh shuruudo gaar ah.
Inta badan, macaamiishu waxay heli doonaan lix bilood si ay uga bixiyaan iibsigooda waaweyn iyada oo aan wax ribo ah lahayn. Iibka u qalma waa inuu ka badan yahay 99 dollars.
Mid ka mid ah tafaariiqda ugu caansan ee PayPal Credit waa eBay, gaar ahaan sababtoo ah iskaashiga muddada dheer ee u dhexeeya labada nooc ee caanka ah.
Macaamiisha waxaa laga yaabaa inay u qalmaan gunnooyinka khadka amaahda dheeraadka ah iyadoo ku xiran tafaariiqda. Weli, dabacsanaanta guud ee ay bixiso PayPal Credit waa mid ka mid ah sababaha ay ugu leedahay sumcad la isku halayn karo oo ay ku leedahay dukaamada internetka.
Arrin kale oo gaar ah oo maskaxda lagu hayo ayaa ah in PayPal Credit aysan ku siinin kaarka deynta. Credit PayPal waa khad deyn ah oo lagu dhex daray akoonkaaga PayPal. Waxaad isticmaali kartaa xisaabaadka bangiga ee ku xiran iyo hadhaaga PayPal si aad u sameyso lacag-bixinno bille ah. Sidoo kale ma jiraan ganaaxyo lacag-bixineed ka hor, markaa tani waxay ka dhigan tahay inaad bixin karto dhammaan baaqigaaga deynta PayPal wakhti kasta.
Waxaa laga heli karaa dhowr tafaariiqle oo khadka ah (eBay, Target, Best Buy)
Ma jirto wax xiiso ah oo ku saabsan iibsiyada ka badan $99 muddo 6 bilood ah
Macaamiisha waxay xaq u leeyihiin kordhinta khadka amaahda ee xilliyeed
Ma jiraan Ganaaxyo Lacag-bixineed kahor
Dhammaan Macaamiisha uma qalmi doonaan khadka amaahda ee PayPal Credit.
Jiirka xiisaha weyn ka dib Muddada Gudbintu way dhacaysaa
ViaBill waa xal kale oo caan ah oo maalgelinta macaamiisha ah oo dukaameeysatada si ay uga fiirsadaan isticmaalka mareegaha u qalma. Goobtan waxaa loogu talagalay inay u qaybiso iibsiyada waaweyn afar lacag-bixinno isku mid ah bishii. Haddii aad si sax ah u bixiso mid kasta oo ka mid ah afarta lacag-bixinahaaga bishii, ma bixin doontid wax dulsaar dheeraad ah oo ku saabsan iibsashadaada.
Macaamiishu waxay sidoo kale ku kalsoonaan karaan in ViaBill ay isticmaasho adeegayaal badbaadsan oo sugan si ay u ilaaliyaan dhammaan macluumaadka shakhsiyeed. ViaBill waxay horeba ugu biirtay in ka badan 5,000 tafaariiqle waxayna sii waddaa inay ku fido goobo cusub si joogto ah.
Ku bixi iibsiyo waaweyn oo afar ah oo kala duwan bishii
Wax dulsaar dheeraad ah ma leh haddii wax iibsiga lagu bixiyo waqtigii loogu talagalay
Badbaadada iyo Badbaadada u ah Macaamiisha
Dhammaan Macaamiisha uma qalmaan
Qaar ka mid ah tafaariiqlayaasha caanka ah ma taageeraan Maalgelinta Macaamiisha ViaBill.
Afterpay waa doorasho aad caan u ah maalgelinta macaamiisha sababtoo ah sumcadeeda cajiibka ah ee ay ku leedahay dukaamaysiga iyo tafaariiqda. Macaamiishu waxay iibsigooda waaweyn u qaybin karaan lacago bille ah oo gooni ah oo aan lahayn dulsaar dheeraad ah. Khidmadaha soo daaha waxay khuseeyaan oo keliya macaamiisha ku guul darraystaan ​​inay ku bixiyaan biilasha bishiiba waqtigii loogu talagalay. Macaamiisha waxa kale oo laga yaabaa inay xaq u yeeshaan inay dib u jadwaleeyaan lacag-bixintooda bishii dhawr jeer sannadkii.
Goobta maalgelinta macaamiisha ee Afterpay ayaa aad caan ugu ah tafaariiqda dharka ee internetka. Macaamiishu waxay hubaal ahaan heli doonaan fursad weyn oo ay ku isticmaalaan Afterpay markay wax ku iibsanayaan tafaariiqda xaqa u leh. Kaliya dooro ikhtiyaarka hubinta 'ka dib bixinta' si aad u hesho ogeysiis xaq u yeelasho degdeg ah.
Wax dulsaar ah malaha haddii wakhtigeeda lagu bixiyo
Ma jiraan khidmadaha dheeraadka ah haddii lagu bixiyo waqtigii loogu talagalay
Ogeysiiska u-qalmitaanka degdega ah ee hubinta
Laguma Taageero Dhowr Dukaan oo Online ah
Habka maalgelinta xaqiijinta waa mid aad u fudud in la isticmaalo. Waxaad si ku habboon u dooran kartaa madalkooda marka la hubinayo tafaariiqle u qalma go'aan degdeg ah oo ku saabsan xaq u yeelashada. Haddii aad u qalanto, waxa aad heli doontaa lacagta lagu qiyaasay ee bille ah ee iibsashadaada.
Qalabkan waxaa si gaar ah loogu talagalay macaamiisha doonaya inay bixiyaan wax iibsigooda waqti dambe. Macaamiishu waxay dooran karaan taariikhda lacag bixinta ee ay door bidaan, mana jiri doonto ujro daahsan ama kharashyo ganaax dheeraad ah.
Ma jiraan khidmadaha soo daahay ama khidmadaha ciqaabta
Macaamiishu waxay dooran karaan Jadwalka Lacag-bixinta ay door bidaan.
Aan Si Balaadhan Looga Helin Tafaariiqda
Adeegga Macmiilka oo xadidan
Maaliyaddu runtii waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee maalgelinta macaamiisha. Halkii aad ka bixin lahayd kharashaad badan oo horudhac ah, waxaad si weyn u dhimi kartaa kharashyadaada bilowga ah oo aad bixin kartaa wax iibsiga waaweyn muddo ka dib. Waxaad heli doontaa go'aamo oggolaansho degdeg ah ka dib markaad buuxiso codsigaaga.
Heerarka ribada ee deyntaada wax iibsiga way kala duwanaan doontaa iyadoo lagu saleynayo taariikhda deyntaada. Bixinta xayeysiinta ayaa soo booda waqti ka waqti, laakiin uma muuqdaan kuwo deeqsi ah sida dhowr meelood oo kale oo aan eegnay.
Go'aanka Ansixinta Degdegga ah
Codsiga Amaahda Degdega ah oo Fudud
Lacag-bixinaha joogtada ah ee bilaha ah oo leh Jadwalka gaarka ah
Ma jirto Heerarka Dulsaarka
Qaar ka mid ah Heerarka Ribada ayaa aad u sarreeya
UCFS waa shirkad maalgelisa macaamiisha gaarka ah oo si degdeg ah ugu fidday daraasiin ganacsiyo iyo warshado caan ah. UCFS waxay si toos ah ula shaqeysaa milkiilayaasha ganacsiga si ay u siiso xal ku habboon oo ka caawiya inay koraan ganacsigooda iyagoo siinaya inay maalgeliyaan macaamiisha.
Laga heli karo Dhowr Tafaariiqle oo Caan ah
Leh Habka Codsiga onlaynka ah
Leh Nidaam Biil Bixin Fudud
Aan Si Toos ah u Siin Fursadaha Maalgelinta Macaamilka
Akhri: 25ka Blog ee Maaliyadda Shaqsiyeed ee ugu Wanaagsan 2022
Amazon Credit waxay leedahay faa'iidooyin xiiso leh oo dhowr ah, laakiin ikhtiyaarkan maalgelinta ayaa kaliya laga heli karaa bogga Amazon. Waxa jira saddex xilli oo xayaysiis ah, oo ay ku jiraan 6-bilood, 12-bilood, iyo 24-bilood oo ikhtiyaar ah oo leh shuruudo iibsi oo kala duwan.
Maalgelinta gaarka ah waxay bixin doontaa 0% APR haddii iibku ku dhammaado xilliga maaliyadeed, xayeysiinta.
Amazon Credit sidoo kale ma bixiso khidmad sanadle ah waxayna siisaa macaamiisha mas'uuliyadda eber-khiyaanada. Macaamiisha sidoo kale waxay xaq u leeyihiin dib u soo celinta lacagta caddaanka ah marka ay wax ku iibsanayaan khadka Amazon Credit.
Marka lagu daro dhammaan faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka cajiibka ah, macaamiishu waxay sidoo kale xaq u yeelan karaan inay helaan $40 Kaarka Hadiyada Amazon haddii loo oggolaado bixinta maalgelinta amaahda Amazon.
Macaamiisha xaqa u leh waxay heli doonaan $40 kaarka hadiyadda Amazon si ay u ansixiyaan.
Seddex dalab oo kala duwan oo Amazon Credit Promotional (6-bilood, 12-bilood, iyo 24-bilood)
Wax Kharash Sannadeed ah Malaha iyo Mas'uuliyadda Khayaanada eber ee Macaamiisha
Go'aamada amaahda degdega ah ayaa la heli karaa
Kaliya waxaa laga heli karaa bogga Amazon ee maalgelinta
Wareeg Internet Maaliyadeed
Waxay ku taal USA, Circle waa shirkad lacagta dhijitaalka ah oo la aasaasay 2013, waxayna dhisaysaa qayb ka mid ah alaabooyinka macaamiisha ah oo loogu talagalay in lagu suurtageliyo fududaynta isticmaalka khadka tooska ah iyo lacag-bixinta qof ahaaneed, la xoojiyay amniga iyo qarsoodiga macaamiisha, iyo ku habboonaanta bilaashka ah. , degdeg ah, xawilaadaha lacagaha dhijitaalka ah ee caalamiga ah.
Akhri: 20 Personal Finance Excel Template ee 2021
Waxay ku taal USA oo la aasaasay 2015, Xitaa Maaliyadeed waa shirkad B2B2C fintech ah oo beddeleysa habka ay hay'adaha maaliyadeed u helaan oo ay ula xiriiraan macaamiisha.
Adigoo si aan kala go 'lahayn isugu xiraya hay'adaha maaliyadeed (oo ay ku jiraan American Express, Goldman Sachs, iyo SoFi) iyo la-hawlgalayaasha kanaalka (sida TransUnion, The Smart Wallet, iyo The Penny Hoarder) iyada oo loo sii marayo API-ga hogaaminaya warshadaha,
Xataa waxay u rogtaa meel kasta oo la taabto macmiilka ROI-guusho, isha barnaamijku ku heli karo oo leh u hoggaansanaan buuxda iyo amniga guud ahaan deymaha, kaydinta, kaararka deynta, iyo in ka badan.
Ripple waxay bixisaa xalalka xalinta maaliyadeed ee caalamiga ah si ay awood ugu siiso aduunka inay isweydaarsadaan qiimaha sida ay horayba u beddeleen macluumaadka - taasoo kor u qaadaysa Internet of Value (IoV).
Xalalka Ripple waxay hoos u dhigaan wadarta qiimaha dejinta iyaga oo awood u siinaya bangiyada inay si toos ah, isla markaaba wax ula macaamilaan, iyo hubaal dejinta.
Bangiyada adduunka oo dhan waxay la kaashanayaan Ripple si ay u wanaajiyaan bixinta lacag bixinta xudduudaha, iyo inay ku biiraan sii kordhaya, shabakadaha caalamiga ah ee hay'adaha maaliyadeed iyo kuwa suuqa sameeya ee dhigaya aasaaska Internetka ee Qiimaha.
Waxay ku taal Singapore oo la bilaabay 2016, Bambu waa mid ka mid ah La-taliyayaashii B2B Robo ee Aasiya ugu horreeyay. Bambu waxa ay dhistay codsiyo kala duwan oo ay isticmaalaan ganacsiyada doonaya in ay u fidiyaan macaamiishooda adeegyo maalgalin oo toos ah, oo tignoolajiyada lagu kordhiyey ('Talo')
Laga soo bilaabo badeecooyinka kaydka fudud ee tafaariiqda, faylalka faylalka badan ee hodanka ah, iyo faylalka faahfaahsan ee macaamiisha bangiyada gaarka ah, Bambu's B2B madal dhijitaalka ah ayaa bixisa hal-abuur leh, sahlan isticmaalka kharash-ku-ool ah iyo meel wax-ku-ool ah oo laga galo adduunka hantida.
Waxay ku taal USA oo la aasaasay 2012, Acorns waa shirkaddii ugu horreysay ee siisa maalgashi-yar oo adduunka ah. Matoorka maaliyadeed ee gaarka ah wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay soo ururiyaan isbeddelka firaaqada wax iibsiga maalinlaha ah oo ay ku maalgeliyaan qaddar-hoosaadkan dollar-hoosaadka ah faylalka tusmooyinka si xirfadaysan loo maareeyo.
Kaliya ku xidh wixii credit ama kaarka debit ah iyo koontada hubinta, ka dibna lacag ku bixi sida aad caadiyan samayso si aad u daawato faylalkaaga oo suuqa la koray. Way fududahay in la bilaabo marka aad maalgelin karto qaddar kasta, wakhti kasta oo aan lahayn guddiyo ama ugu yaraan.
Akhri: Waa maxay Maaliyadda Shakhsiyeed? | Hagaha Khabiirka
Maxay qabtaan shirkadaha maalgeliya macaamiishu?
Shirkadda maaliyadeed ee macaamiishu ma hesho dhigaal laakiin waxay u samaysaa amaahda macaamiisha si ay u isticmaalaan ganacsi ama shakhsi. Faa'iidada ay ka hesho deymahan dulsaarka ah. Waxa kale oo loo yaqaan si fudud shirkad maaliyadeed.
Waa maxay 4-ta nooc ee deymaha macaamiisha?
Kaararka deynta: Waxaa isticmaala macaamiishu si ay u maalgeliyaan wax iibsiga maalinlaha ah.
Amaahda baabuurta: Waxaa isticmaala macaamiishu si ay u maalgeliyaan gadashada baabuur.
Amaahda ardayda: Waxaa isticmaala macaamiishu si ay u maalgeliyaan waxbarashada.
Amaahda Shakhsiyeed: Waxaa isticmaala macaamiishu dano gaar ah.
Maxay ku jirtaa maaliyadda macaamiisha?
Suuqyada maaliyadeed ee ugu waaweyn ee macaamilka waxaa ka mid ah amaahda amaahda guryaha, amaahda ardayda, amaahda baabuurta, kaararka deynta iyo lacag bixinta, deymaha maalmaha shaqada iyo alaabada kale ee amaahda kale ee maaliyadeed, iyo hubinta xisaabaadka iyo beddelka.
Waa maxay isha ugu weyn ee dhaqaalaha macaamiisha?
Macaamiishu waxay ka amaahan karaan ilo dhowr ah. Ilaha ugu muhiimsan ee amaahda macmiisha waxaa ka mid ah hay'adaha maaliyadeed ee nooca dhigaalka, shirkadaha maaliyadda macaamiisha, shirkadaha maaliyadda iibka, amaahda siyaasadda caymiska nolosha, deynta sinnaanta hantida maguurtada ah, asxaabta iyo qoyska, iyo dukaamaysiga.
Waa maxay deynta ugu badan ee macaamiisha?
Amaahda macaamiisha ee ugu caansan waxay ku yimaadaan qaab deyn qaybeed.
Isku soo wada duuboo, doorashada shirkad maaliyadeed oo macaamiisha ah si aad ula shaqeyso inta lagu jiro howlahaaga ganacsi waa nidaam adag.
Laakin adiga oo isticmaalaya macluumaadka ku jira maqaalkan, waxa aad hubin kartaa in aad la macaamilayso mid ka mid ah shirkadaha maaliyadeed ee macaamiisha ugu wanaagsan baahiyahaaga gaarka ah.
Iyadoo la tixgelinayo waxaas oo dhan, habka ugu wanaagsan ee maalgelinta macaamilka waa in lala shuraako shirkad bixiya qorshooyin maaliyadeed oo dabacsan.
Ma jiraan dad badan oo dhulka jooga oo jecel inay qirtaan inay haystaan ​​dhibaatooyin lacageed. Waxay doorbidaan…